Wasiir Falagle “Halaga daayo in la gato Ergada iyo Xildhibaanada” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Falagle “Halaga daayo in la gato Ergada iyo Xildhibaanada”
Wasiir Falagle “Halaga daayo in la gato Ergada iyo Xildhibaanada”
Iyadoo dhawaan la fillayo inay dalka ka dhacdo Doorashada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ayaa waxaa soo badanaya dadka daneynaya inay ka mid noqdaan Ergada iyo xubnaha kale ee baadigoobka ugu jira ka mid noqoshada Aqalka Golaha Shacabka.
Ergada waa kuwa soo dooranaya Xildhibaanada Golaha Shacabka, kuwaa oo ay soo xulayaan Odayaasha Dhaqanka ee qabaa’ilada.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa sababta ay dadka u daneynayaan inay ka mid noqdaan Ergada waxaa uu ku sheegay iyagoo dhaqaale ka dhex arkay.
“Somaliya waxaa baabi’iyay cadaalad darro iyo cabsi Ilaahay oo laga fogaaday, maanta waa fursad. Hadda waxaan ognahay Ergada aad baa loo daneynayaa, waxaa la leeyahay hala igu daro. Hala igu daro waxaa loo lee yahayna waxaa weeye in lacag la qaataa la rabaa.” Ayuu yiri Wasiirka oo ka qayb qaadanayay Barnaamijka Doodda Jimcaha ee ‘Waxa ay ila tahay’.
Wasiir Falagle ayaa Odayaasha Dhaqanka iyo Dowlad Goboleedyada ugu baaqay inaanan Ergada iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka lagu soo xulin nin jecleysi iyo musuqmaasuq, laguna soo xulo aqoonta ay leeyihiin.
“Nabadoonada, maamulada iyo cid kastoo awood iska leh Ilaahay iyo aakhiro intey xusuustaan maanta qofka halagu xulo waxa uu yahay iyo aqoonta uu leeyahay ee halaga daayo in la gato Ergada iyo Baarlamaanka.” Ayuu yiri Falagle.
Golaha Shacabka oo ka kooban 275 kursi ayaa sidii horeyba loo shaaciyay waxaa Xildhibaankiiba soo dooranaya 101 ergo, oo ka imaanaya beesha iska leh kursigaasi.
Previous articleSomtel oo soo kordhisay adeegga Ku Shubo oo Ku Guuleyso 10,000 Hadiyadood
Next articleRa’iisal Wasaaraha Somaliya oo ku sii jeeda Magaalada Garbahaarey